#Wakiilka Philippe Coutinho ayaa yimid Paris si uu wadahadalo ula yeesho PSG.
Wararka ka imanaya gudaha dalka Spain ayaa waxay sheegayaan in wakiilka xiddiga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho uu gaaray caasimada dalka Faransiiska ee Paris.
Wakiilka Philippe Coutinho ayaa la qorsheenayaa in wada hadal ku aadan saxiixa xiddiga reer Brazil uu la yeesho maamulka kooxda Paris Saint – Germain.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in u dhaqaaqista Coutinho ee kooxda PSG ay noqon doonto marxaladdii ugu dambeysay uu Neymar Jr dib ugu laabanayo Barcelona.
#Klopp oo qiimeeyay Liverpool: Waxyaabo badan way saxan…
Kooxda reer Catalonia ayaa dooneysa in Coutinho ay qeyb kaga dhigto heshiiska ay Neymar Jr dib ugu soo celineyso garoonka Camp Nou, maadaama aysan heysan lacag ku filan oo ay ku bixiso heshiiska Neymar Jr.
Coutinho ayaa ku fashilmay inuu hantiyo quluubta taageerayaasha kooxda Barcelona mudada sanadka iyo barka ahaa uu ku sugnaa garoonka Camp Nou, wuxuuna ciyaaray 76 kulan.
Wakiilada Barcelona, agaasimaha kubadda cagta kooxda ee Eric Abidal iyo xubin ka tirsan guddiga maamulka ayaa haatan ku sugan magaalada Paris, si ay isugu dayaan inay soo afjaraan heshiiska ay ku doonayaan in Neymar Jr ay dib ugu soo celiyaan garoonka Camp Nou.
47 mins ago 24,119 0